जब मानिस अरुको अधिनमा दबिएको हुन्छ तब उसको चाहनाअनुसार प्रगति गर्न सक्दैन | Namuna Nepal
गृहपृष्ठ जब मानिस अरुको अधिनमा दबिएको हुन्छ तब उसको चाहनाअनुसार प्रगति गर्न सक्दैन
नबिन तिम्सिना |
संसारको सबै भन्दा बुद्धिजिवी प्राणी मानव जाती हो, हामी सबैलाई थाहा छ । युगका बिभिन्न काल खण्ड पार गर्दै मानव जातीले बिकास गरेको बौद्धिक क्षमता अकल्पनिय छ । गहिरिएर सोचौं त यहीँ लेख पढ्दैगर्दा र एक पटक हजुरलेनै हातमा समाएको मोबाइल हेर्नु होस् , माउस घुमाइरहेको ल्यापटप, कम्प्युटर हेर्नु, अनी टाउको यता उती घुमाएर आफ्नो नजिक भएका हरेक कुरा हेर्नुहोस् त।
तपाईंले के- के देख्नु भयो! यो पढ्दै गर्दा घरमा हुनुहुन्छ भने टि भि , किचनका समान , पंखा , झोला , तार , के -के हो- के के अझ नियाल्नु त! झोलाको चेन बटम ,सियो ,धागो अती सामान्य लाग्ने र कहिले नोटिस नगरेका समान, पैसाका सिक्का , तेलका डब्बा , सानो किला आदी- आदी । अब एकछिन गहिरो सास लिनुहोस् अनि सोच्नुहोस् त यि घरमा भएका साना साना कुराहरु कसरी बने ? यी हामीले यत्तिकै घरमा त बनाउन सकेको हैनौ , किनेर ल्याएका हौँ।
लेखेको दस मिलिसेकन्डमा पठाएको मेसेज संसारको अर्को कुनामा कसरी पुगेको छ? गहिरो तरिकाले मनन् गर्नु है यो पढ्दै गर्दा। यो सबै मानव जातीको बिकासको फल हो । तपाईं हामी जस्तै मान्छेको सोचले सम्भब भएको कुराहरु हुन् ।
सोच भन्ने चिज यस्तो होनी असामान्य लाग्छ तर जब त्यस्ले अनेकौ खण्ड पार गर्दै मूर्तरुप पाउछ अनी बल्ल सबैको स्विकार्य हुन्छ । बिकासका अनि प्रबिधीका कुरा गर्न मैले यहाँ खोजेको हैन, यो हामी सबैलाई थाहा छ तर मैले मात्र लेख्न खोजेको के भने यो यावत अकल्पनिय कुराहरु बनाउने सोच कहाँबाट आउछ ?
हामी जस्तै हुन ति मान्छे पनि जो चन्द्रमा पुगेका छन्, एउटै मुटु छ , दुई हात, दुई खुट्टा, दुई आँखा,दुई कान। कतिपयले भनेको सुन्ने गरेको छु, ह्या मरेर जाने जिन्दगी हो के को टेन्सन मोज गरिन्छ दुई दिनको जिन्दगीमा । सायद तपाईंले पनि सुन्नु भएको छ होला। यो कुरा सम्झनुहोस् त। के मरेर जाने जिन्दगी भन्दैमा ति बैज्ञानीकले मोबाइल बनाउने नसोचेको भए घरमा बसेर संसारभर मोबाइल बाटनै कुरा गर्न पाउथ्यौँ त ?
के राइट ब्रदर्सले जहाजको पारीकल्पना नगरेको भए नेपाल देखी यत्रो सात समुन्द्र पारी आउन पाउथ्यौँ त ? अब तपाईंलाई यो कुरा हो भन्ने पनि लागिसकेको छ पक्कै, लागेको छ भने अरु पढ्नु होला मैले लेख्न खोजेको कुरा आउँदै छ। हामी कसैलाई लाग्न सक्छ! त्यस्को परिवार कस्तो थियो! यस्तो थियो र प्रगती गर्‍यो , उसको आफन्तले यसरी सिकायो र उसले गर्‍यो तर यस्तो कुराहरु चित्त बुझाउने बाटो मात्र हुन्छन् ।
तपाईं हामी जब सकरात्मक सोच र आट लिएर सँघर्षसँग नडराइ ,हार ,असफलतालाई पार गर्दै अगाडि बढ्छौ नि, ढिला चाडो गन्तब्य मा पुग्छौ- पुग्छौ। यसकालागि हाम्रो सोच अनी हामी फराकिलो हुनु पर्छ। जब हामी कसैको अधिनमा दबिएको हुन्छौ, च्यापिएको हुन्छौ , कसैसँग डराएको हुन्छौ, कुनै पनि सेक्टरमा हामीले चाहे अनुरुप प्रगती गर्न सक्दैनौ।
अन्त कहीँ सोच्नै पर्दैन, हामी अहिले काम गर्ने रेस्टुरेन्टमै हेरौ न। यदि हामीले सानो गल्ती गर्दा पनि साहुले थर्काउने, कराउने छ भने त्यो ठाउँमा हामीले काम त गर्छौ तर त्यहीँ काम लाई आफ्नो थप कला र दिमाग लगाएर पर्फेक्ट बनाउन सक्दैनौ। किनकि हामीमा डर उब्जेको हुन्छ मनमा। त्यसैले त संसारका ठुला ठुला कम्पनीहरुले आफ्नो म्यानेज्मेन्ट सिस्टमनै मोर्डनाइजेसन गर्दै लगेको छन्।
अब टुदि पोइन्टमा जाउँ, अरु कसैलाई नहेरी हामीले एक पटक आँफैले आजसम्म भोग्दै आएका समयहरुलाई सम्झिउ त! के हामी दबिएका छौ ? के हामी शोषणमा त परेको छैनौ ? कानुनी – सामाजिक मर्यादालाई कायम गर्दै यो बाहेक अन्य कुराहरुमा। यदि हामी अनी हाम्रो क्षमतालाई कसैले दबाउन अनी फाईदा लिन खोजेको छ भने त्यसलाई तोड्न सक्नु पर्छ। त्योबाट उम्किएर निस्कन सक्नु पर्छ।होला केही दिन अप्ठेरो पर्ला तर जीवनमा प्रगती गर्नु छ भने खुल्ला सोच लिएर अगाडि बढ्नु पर्छ । असफलनै हुँदा पनि आत्मसन्तुष्टि मिल्ने छ र योनै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हुन्छ ।
म यहाँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु पूर्वि नेपालमा मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ ।युवा ब्यबसायी र नेपालमा केही नयाँ प्रबिधी भित्र्याउने सोच भएको । उहाले नेपालमानै उत्पादन गर्ने गरेर विद्युतिय गाडीको काम आरम्भ गरी ४० वटा जती निकाल्नु भएको थियो। तर पछि उहाँको त्यो योजना लाई न सरकार ले मान्यता दियो न समर्थन नै गर्‍यो। बिभिन्न निकायमा उहा धाउनु भयो।
कहिले के कहिले के भनेर उहाको सोच अनी योजना लाई दबाइयो , उहासँगको कुराकानीमा उहाँले भन्नु भएको कुरा हो यो । नेपालमा उहाको कार्यको लागि समर्थन नपाएपछि अहिले पोर्चुगल सहित युरोपका अन्य देशबाट मान्यता लिएर सोही कार्य आरम्भ गरिसक्नु भएको छ । अझ नेदरल्याण्ड सरकारले त उक्त कार्यको स्थापनाको लागि प्रारम्भिक सपोर्ट पनि गरेको छ ।
यस्ता अनेक सोच, साधन र पैसा भएका युवा देशमा त्यो चिजको कदर नभएर संसारका कुना कुनामा लगानी गर्न पुगेका छन्। अनी हाम्रै देशको सरकार सहयोगको लागि ति राष्ट्रहरुसँग सहयोगको अपिल गर्दै हिड्छ।
चाहे राज्य बाट होस्, चाहे परिवारबाट जे गर्दा पनि त्यसलाई खुल्ला रुपले अगाडि बढ्न नदिने हो भने ति सोचहरु बिच बाटोमै बिलिन हुन्छन्। सायद नेपालमा पनि युवाहरुलाई समर्थन गर्ने निकाय नभएर होकि, संसारका कुना -कुनामा आफ्नो अधभुत क्षमता देखाउन सक्ने नेपाली दाजुभाई ,दिदीबहिनीहरु नेपाल बस्न नरुचाउनु भएको र नेपाली नागरिकतानै त्यागेर बिदेशी पास्पोर्ट तिर लम्किनु परेको ।
पछिल्लाे - पोर्चुगल अपडेट:थप ६ सय ३ संक्रमित हुँदा ११ सय ४३ जना निको भएर घर फर्किए
अघिल्लाे - पोर्चुगल अपडेट:तुलनात्मक रुपमा आशा लाग्दो अबस्था, कोरोना संक्रमित १२ सय १ जना निको भएर घर फर्किए
सामाजिक संजालमा बधाई दिन हतार गर्ने तर आफ्नै चेलीबेटीमाथी अत्याचार- शोषण हुँदा चुइक्क नबोल्ने!